Xaalad kasta oo cuntada ama cabitaannada la keeno miiska caadiyan waxay u baahan tahay talo. Qaddarku wuxuu kuxiran yahay nooca cuntada aad jeceshahay. Qawaaniinta caadiga ah ee Yurub dhexdeeda waa inaad kaga tagto hal ama labo biilasha lacagta dusha sare ah markay tahay cabitaanno laakiin aan cuntada la dalban. Cunnooyinka buuxa ee jawi fadhiisintu way kala duwan yihiin. Kiiskan, qofkiiba dhawr euro ayaa badiyaa ku filan. Makhaayadaha shanta xidig leh ee kuyaala qaarada Yurub badanaa waxay ku daraan caarada biilkooda. Hubso inaad fiiriso tan sababtoo ah looma baahna inaad ka tagto tilmaamo dheeri ah ilaa aad runtii ku raaxeyso adeeggaaga. Adeeg heer sare ah ayaa mararka qaar u baahan talo dheeri ah, sidaa daraadeed kiisaskaas, waxaa laga yaabaa inaad sida ugu badan u socoto 15%.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Hagaha kama dambaysta ah ee ku baahidda Yurub” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/?lang=so የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)